नेता होइन जनतालाई जिताउनुहोस् – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
नेता होइन जनतालाई जिताउनुहोस्
१७ बैशाख २०७९, शनिबार ०७:५०
२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस बुढानीलकण्ठ नगरपालिका-१० मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वडाध्यक्षमा डोरप्रसाद आचार्य सर्वसम्मतरूपमा उम्मेदवार हुनुभएको छ । आचार्यले जीवनको ३० वर्ष शिक्षाको ज्योति छर्नमा व्यतित गर्नुभयो । समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी तथा मिलनसार व्यक्तित्वका धनी आचार्यले अरूका निम्ति शिक्षाको ज्योति छर्दै आफूले पनि सामाजिकशास्त्र र शिक्षा योजना तथा व्यवस्थापन दुई विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ ।
विद्यार्थी जीवनदेखि नै नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको उन्मूलनका लागि भएका आन्दोलनहरूमा सहभागी हुँदै उहाँले २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनमा भाग लिनुका साथै प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यता आत्मसात गरी नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता ग्रहण गर्नुभयो । २०६३ सालदेखि २०६६ सालसम्म नेपाल शिक्षक संघ जिल्ला कार्यसमितिको सदस्य भएर काम गर्नुभएका उहाँ राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार २०५७ तथा जिल्ला शिक्षा पुरस्कार २०७१ बाट सम्मानित हुनुभएको थियो । अहिले विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध रहेर उहाँ जनतामाझ अत्यन्तै लोकप्रिय र सबैको मनमस्तिष्कमा रहन सफल व्यक्तिसमेत हुनुहुन्छ ।
कांग्रेसका प्रखर युवानेता तथा महामन्त्री गगनकुमार थापाको क्षेत्र, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका-१० को वडाध्यक्षमा प्रभावशाली उपप्राध्यापक आचार्यलाई सर्वसम्मतरूपमा उठाएर नेपाली कांग्रेसले सिंगो देशभरि, विशेषगरी बुढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई विशेष महत्व दिएको देखिन्छ । यसबाट कांग्रेसले राजनीतिक क्षेत्रमा बौद्धिक व्यक्तित्वको आवश्यकता रहेको सन्देश प्रवाहित गरेको छ । स्थानीयस्तरमा इमानदारिता, सद्भाव, सहकार्य एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नुहुने आचार्य देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर जे गर्दा राम्रो हुन्छ आफूले त्यही गर्ने बताउनुहुन्छ । वडाध्यक्षका उम्मेदवार डोरप्रसाद आचार्यसँग हिमालय टाइम्सका लागि कृष्ण भुसालले गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानी :-
यहाँले लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुभयो, यतिबेला राजनीतिमा सक्रियरूपमा आउनुभएको छ, यसका पछाडि केही कारण छन् कि ?
सेवाको भावले नै मलाई सक्रिय राजनीतिमा तान्यो । मेरो जीवनको लामो कालखण्ड सामाजिक तथा शैक्षिक सेवाले ओगटेको छ । अब पेशाबाट सेवानिवृत्त भएँ । सन्तान पनि आत्मनिर्भर भइसके । खाना, नाना र छानाका लागि दुःख छैन । एक हिसाबले मैले उन्नत जीवनयापन गरिरहेको छु । अब बाँकी जीवन सेवा र साधनामा बिताउन चाहन्छु । यसका लागि मैले राजनीतिलाई उत्तम अवसरका रूपमा लिएको छु । राजनीतिलाई पवित्र सेवाका रूपमा चिनाउँदै कम्तीमा हाम्रो वडा नं. १० लाई सफा, सुन्दर, शान्त, सभ्य र समृद्ध बनाउँदै अघि बढ्न म सक्रिय राजनीतिमा आएँ ।
राजनीतिमा तपाईंको के-कस्ता योगदानका कारण यो पदका लागि यहाँलाई पार्टीले सर्वसम्मतरूपमा छनोट गर्‍यो भन्ने लाग्छ ?
मलाई उम्मेदवार बनाउँदै गर्दा पार्टीले कम्तीमा दुई मुख्य कुरा हेरेको हुनुपर्छ । पहिलो त ममा राजनीतिक चेतना आएपछि मैले कांग्रेसको झण्डा बोकेँ । तीन दशकदेखि मैले कुनै न कुनै रूपमा पार्टीसँग आबद्ध भएर सेवा गरिरहेँ । आफ्नो क्षेत्रमा कांग्रेसको दर्बिलो उपस्थितिका लागि दत्तचित्त भएर लागेँ । त्यसैले म आफूलाई पार्टीको कर्तव्यनिष्ठ पहरेदार भन्न रुचाउँछु । सायद पार्टीले यसलाई नियालेको होला । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुराचाहिँ म लामो समयदेखि शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत भएकाले यहाँका सबै प्रकारका जनतासँग मेरो प्रत्यक्ष सम्बन्ध बन्यो । मेरो सम्बन्ध र ज्ञानलाई जनताको समग्र हितका लािग प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर होला पार्टीले मलाई वडामा नेतृत्वका लागि अवसर दियो ।
तपाईं बुढानीलकण्ठ नगरपालिका-१० को वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुने आधार के-के छन् ?
मैले धेरै कुरा त भनिसकेँ । मूलरूपमा मेरो उम्मेदवारी मेरो र पार्टीको चाहनामात्र होइन, यो यहाँका जनताको माग पनि हो । यसर्थ म वडा नं. १० को साझा उम्मेदवार हुँ । मेरा केही भिजन र मिसन छन् । क्षमता छ । अनुभव छ । जनतासँग सिधा र मित्रवत् सम्बन्ध छ । त्यसैले मैले चुनाव जित्ने धेरै आधारहरू छन् ।
तपाईंका चुनावी एजेन्डा के-कस्ता छन् ?
हाम्रो घोषणापत्रमा सबै कुरा समेटिएका छन् । तथापि हामी सानो कामबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्छाैँ । हामीले यहाँको सरसफाइ, सभ्यता, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण अनि सभ्य समाजको निर्माणका लागि योजनाहरू बनाइरहेका छौँ ।
यतिबेला यो वडामा के-कस्ता समस्याहरू रहेको तपाईं पाउनुहुन्छ ?
यहाँ धेरै समस्याहरू छन् । जस्तो सरसफाइ, सडक निर्माण, ढल व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, चुस्त सेवा आदि ।
यी यावत् समस्यालाई समाधान गर्न के यहाँको नेतृत्व भयो भने सम्भव होला ?
मेरो उम्मेदवारी नेता बन्न होइन । जनताको सेवा गर्न हो । काम गर्न हो । जितपश्चात् पहिलो दिनदेखि नै म जनताको सेवामा जुट्छु । हामीसँग समय तालिकासहितका विभिन्न योजनाहरू छन् जुन अवश्य हामी पूरा गर्छाैँ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनचाहनाअनुसार कार्य गर्न नसक्दा आमजनतामा जनप्रतिनिधिप्रति एकखालको वितृष्णा देखिन्छ, यसलाई यहाँले कसरी सहजीकरण गर्छु भन्ने लाग्छ ?
तपाईँले उठाउनुभएको प्रश्न गम्भीर छ । धेरै पालिकाहरूमा जनताले अनुभव हुने गरी काम भएको छैन । वर्षौँदेखिका समस्या उस्तै छन् । नेताहरू जनताको चाहना पूरा गर्नेभन्दा आफ्नै चाहना पूरा गर्नेतर्फ लागेका छन् । यसले पक्कै पनि जनतामा जनप्रतिनिधिप्रति वितृष्णा बढाएको छ । म यसलाई आत्मसात गर्दै जनताले देखिने र अनुभूति गर्ने गरी काम गर्छु । थोरै बोल्छु, धेरै काम गर्छु । घोषणा गरिएका कार्यलाई सम्पन्न गरेरै छोड्छु ।
मेरा आफ्ना केही विचार सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद । यस अखबारमा कार्यरत तपाईंहरूको सिंगो टिमलाई धन्यवाद । मेरा निश्चित भिजनहरू छन्, त्यसलाई पूरा गर्छु । जनतालाई परिवर्तन महसुस गराउँछु । मतदाताहरूलाई अनुरोध छ कि नेतालाई होइन जनतालाई जिताउन सही किसिमले मतदान गर्नुहोस् ।
2022-05-09 3:57 pm
धेरै कुरा भन्दा पनि कर्मप्रधान योजना लाई परिलक्षित गरि नेपाली काङ्ग्रेस र भुइ तहका जनताको बिचमा असल र सहज सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्ने कार्यलाइ डिपि सर ले उठाउनु भयेका कुरामा गहिरो सम्बन्ध राख्दछ। स्थानिय सरकार को कार्य पद्धती पार्टिगत भन्दा पनि स्थानिय स्तर मा गर्नु पर्ने आधारभुत कार्य र सवै तह र तप्का का जननताको बिकास र पहुच मा सहजता पुर्वक हुन सकोस भन्ने कुरालाइ ध्यान मा राखी वडास्तरिय योजना लाई नपाको योजना सङ्ग सम्बन्वय गरि अघि बढनु हुनेछ भन्ने सवैको बुझाइ रहेको महशुस भयेको छ। वहालाइ यस बुनपाक को स्थानिय निर्वाचन मा अत्यधिक मतले विजयी गराउन सवै वडावासी महानुभाव हरुमा मेरो पनि आर्दिक अनुरोध छ। जय नेपाल्🇳🇵🇳🇵🇳🇵
नेपाली चलचित्र लोकेसन र कथानकका हिसाबले
कृषि उपजको बाइब्याक ग्यारेन्टी गरेका छौं
गर्न खोज्नेलाई राज्यबाट सपोर्ट छैन :
कृषि यन्त्र स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ :
व्यापारीको दबदबा भएको देशमा उत्पादन कसरी
कृषि मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले मात्रै उत्पादन
नतिजा अपेक्षाकृत आउन नसकेकोमा
एनएसएल भदौ २५ देखि
आइजिपी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा,